Ny fijery sy ny feo avy amin'ny "Bosch" (lahatsoratra 2 avy amin'ny 3) - NAB Show News amin'ny Broadcast Beat, Fampielezam-peo ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ny fijery sy ny feo avy amin'ny "Bosch" (lahatsoratra 2 amin'ny 3)
Ny fijery sy ny feo avy amin'ny "Bosch" (lahatsoratra 2 amin'ny 3)
Titus Welliver tahaka an'i Harry Bosch tao an-tranony niaraka tamin'ny LA tamin'ny alina, ohatra tonga lafatra Boschny sarimihetsika sarimihetsika Noir.
Ny lahatsoratra voalohany amin'ity andian-dahatsoratra ity dia mirakitra ny fomba, toy ny tantaran'i Bosch avy amin'i Michael Connelly dia nitarika ny fomban-drazana sarimihetsika saribakoly mafy sarotra amerikana mafonja avy amin'ny fitiavana an'i Raymond Chandler sy Dashiell Hammett, ka ny Amazon Prime Video Bosch Ny andian-tsarin'ny televiziona dia manohy ny fijery maoderina sy sarimihetsika sarimihetsika noir. Ary ny roa amin'ireo olona tena tompon'andraikitra amin'ny fahatsapana fa mahatsiaro ny hafahafa dia ny DP's Season Five, Michael McDonough (ASC, BSC, AMPAS) ary Patrick Cady (ASC), izay samy samy hafa amin'ny andiany.
McDonough, izay nanaiky ny hanaovana fanadihadiana, dia nanomboka nanao sarimihetsika ho an'ireo talen'ny sarimihetsika toy ny David MacKenzie, Rodrigo Garcia, Terence Davies, Stephen Frears, Michael Radford, ary Lawrence Kasdan. Niara-niasa koa izy niaraka tamin'i Debra Granik, mpiara-mianatra taminy NYU taloha, izay be mpitia indrindra Ny taom-piotazana Winter, izay nahazo ny efatra Academy Award Fanolorana anarana ahitana sary tsara indrindra. Ankoatry ny Bosch, McDonough koa no DP Abbey Downton ary Matahora ny maty.
Nanazava ny fomba hanatonany i McDonough Boschny atmosfera noir. "Lafiny iray manokana Bosch Ny fiasanay dia LA tamin'ny alina, "hoy izy. "Misy fahatsapana manokana ho an'ny tanàna izay miverina amin'ny sarimihetsika toy ny hafanana ary niantoka ary ny faniriana nostalgic ny fahazavan'ny masoandro amin'ny alina izay miova haingana ao anaty jiro mivelatra eny an'arabe. Miezaka mafy izahay mba hitazona izany fahatsapana ny loko maromaro marobe sy ny karazana neon izay tonga amin'ny fahatsiarovan'ny LA iray alina. Isika koa dia niasa tao anatin'ny haizin'ny aterineto sy ivelany, nandritra ny taona maro, ary nanaiky ny tabataba izay mety ho tonga amin'ny asa atao amin'ny ambany lanja kokoa mba hampitombo io fahatsapana mangidy io. Nijery betsaka ny tantaran'ilay tanàna izahay sy ny sary nalainy nandritra ny fizarana fahaefatra rehefa nampiasa toerana malaza izahay tany amin'ny faritra afovoan-tanàna. "
Nandritra ny fizarana fahaefatra, nanapa-kevitra ny ekipa iray hanaraka fomba fijery hafa. "Tamin'ny herintaona, dia nisy fiantraikany manokana tamin'ny Ny fifandraisana Frantsay amin'ny fifandraisany amin'ny tontolom-piteny, ary koa ny fahatsapana ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso izay nifanaraka tamin'ny tantara lehibe farany tamin'ny faran'ny taona, "hoy McDonough tamiko. "Misy maso manjopiaka foana, izay aseho amin'ny alàlan'ny soratra sora-matevina, izay miasa toy ny toetr'andro amin'ny famaritana ny fijery mety.
"Nandritra ny fizaran-taona dimy dia niova avy tao amin'ny RED Dragon izahay mba hiadiana amin'ny RED miaraka amin'ny solosaina Monstro. Miaro ny 6K isika amin'izao fotoana izao amin'ny X Extract 5K izay ahafahana mijery fahita lavitra ho an'ireo mpandraharaha, ary mampiasa 8: 1 compresso izahay mba hahafahana mametraka tarehimarika mitovy amin'ny fampiasana Dragons amin'ny 5K miaraka amin'ny 4K. Ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso dia atao amin'ny fampiasana roa Sony PVM254 25 "OLED Monitors. Ampiharintsika amin'ireo LUTs ny horonan-tserasera napetrakay ho an'ny mpijery ary mampiasa Odyssey 7Q Plus monitor / mpaka sary izay mitazona ny 36 LUTs ary miasa koa ho ny fakantsary False Color.
"Mampiasa LED be izao isika amin'izao fotoana izao satria matetika isika no misy toerana telo na efatra amin'ny andro iray isan'andro, ary manaparitaka manodidina ny tanàna amin'ny alàlan'ny kamiao mitoka-monina, ary ny fanontana farany amin'ny rafitra rehetra, toy ny jiro mena na amin'ny Matetika ny teboka dia atambatra amin'ny singa LED mitondra herinaratra. Amin'ny alina, dia matetika isika mampiasa foitran'ireto tontolon'ny fitrandrahana ao amin'ny orinasa indostrialy mipetraka eny ambony lampihazo na amin'ny fitondràna. Ho fanampin'izany dia hanangona tungsten ary HMI isika ary ny fonosana glanda mety hahitana dipoavatra indraindray na cyan. "
Nanontany an'i McDonough ihany koa aho mikasika ny fampiasana famokarana loko amin'ny famokarana lahatsoratra mba hahatratrarana Bosch. "Ny lahatsoratry ny mofomamy mena-Red Wide Gamut Log3g10-dia vita amin'ny Warner Bros. Motion Picture Imaging. Ny famelan-keloka dia alefa amin'ny MTI Cortex ary ny LUTs avy amin'ny set dia ampiharina mba hamoronana sary Rec 709 miaraka amin'ny latsaky ny LUTs '. Manoratra ao amin'ny 6K miaraka amin'ny 5K extraction ary ao amin'ny 8: 1 compression, hamela ny sehatry ny fiarovana amin'ny fakantsary, hamela ny famerenana, ary rehefa ilaina ny fampakarana sary, dia mampiasa ny sary rehetra an'ny 6K isika. Ny rakitra DNX 36 dia natsangana ho an'ny famoahana amin'ny LUTs nampiharina sy ny Synced Sound nataon'i Jesus Borrego.
"Ny sangan'asa atao hoe Scott Klein dia mamaritra ny fampiasana ny LUTs napetraka ho toy ny mpitari-dalana. Ny LUT napetraka dia noforonina nandritra ireo fizarana dimy farany. Scott, ary ny mpikarakara Ara Thomassian dia miasa amin'ny Black Magic Da Vinci Resolve. Dingana roa farany natao tamin'ny mpanatontosa mpanatanteraka Pieter Jan Brugge sy ny iray amin'ireo DP, izaho na Patrick Cady, nanatrika. Ny iray dia 'manazava ny mijery' ary ny iray hafa dia 'loko farany.' Manolotra ny SD-Rec709 Prores422HQ ao UHD izahay. Vita koa ny HDR-Rec2020PQ-ambany i Scott. ny Bosch Ny ekipan'ny Producer Mark Douglas, ny masoivohon'ny Poste Tayah Geist, ary ny mpandrindra Erika Shea dia mijery ireo zavatra mahatalanjona ary manohana an'i Warners, mpitantana ny tetikasa Michael Holland. "
ny ankamaroan'ireo Bosch dia nalaina tamin'ny toerana misy azy fa tsy mifanohitra amin'ny fe-potoam-piraisam-peo (ny fialan-tsasatra dia ny fialam-boly tena mendrika indrindra Hollywood pampitam-pampitam-baomam-bahoaka izay nasongadina be tao anatin'io andiany io). Saingy nisy vanim-potoana tena goavana iray hafa toerana dimy izay nilaina ny seho an-tariby, ny atin'ny fiaramanidina kely iray izay i Harry Bosch dia miady ho amin'ny fahafatesana miaraka amin'ny roa lavitr'ezaka ao amin'ny 8 "tendrombohitra hivoaka." . "Tany am-piandohan'ny famokarana, nidina sidina izahay tamin'ny fiaramanidina Twin Otter ary nandeha fiaramanidina tany amin'ny toerana avo manodidina ny Ranomasin'i Salton mba hahatsapa ny fihetsika izay hoentinay any amin'ny studio. Ny setriny dia tena maodelim-by marina - hendry ho an'ny fiaramanidina tena izy. Zava-dehibe ny nahatsikaritra fa nahatsapa ho toy ny nataonay tany izahay, niezaka ny hitazona ny fandanjalanjanay rehefa nirodana ny fiaramanidina ary niezaka ny naka ny sehatra tamin'ny cameras nentim-paharazana izahay.
"Io dia napetaka manontolo ary napetraka tamina kamio mba hananganana fihetsiketsehana ary mba ahafahana mametraka ny sasantsasany amin'ireo toerana fametrahana fakantsary, dia misy fizarana manodidina ny varavarankely izay mety hiverenana eo amin'ny tenany ihany ary hamela ny fakantsary hampiasa ny fakantsary rehefa ilaina izany ary manome antsika efitrano fohy hiasa. Nanampy T12 izahay teo amin'ny fitaovam-piaramanidina iray mba hanamafisana ny fihetsik'ilay masoandro manodidina ny lamosin'ny tetezana sy ny banky amin'ny rambony. "
Hatramin'ny ankamaroan'ny Bosch dia nalaza tamin'ny toerana iray, mpikambana iray manan-danja indrindra ao amin'ny ekipa no mpitantana ny toerana i Paul Schreiber, izay niresaka tamiko momba ny fandraisany anjara tamin'ilay fampisehoana. Nanomboka ny fanombohana an'i Scrapra ho an'i Scotia i Schreiber, saingy raha nametraka azy io izy, "nirenireny aho Los Angeles ao anatin'ny 1994 mandritry ny iray volana, mba hijery ny zava-misy. Tsy nijanona intsony. Ny fanoherana amin'ny hetsika manokana amin'ny dokam-barotra, ny fahitalavitra ary ny endri-javatra, dia mijery, mikaroka ary manaparitaka-indrindra Kalifornia any atsimo miezaka mitady toerana mety izay mitazona tononkalo amin'ny script, sns. "
I Schreiber no nandeha nandalo ny fizotran'ny asany. "Fanandramana fiaraha-miasa mitaky ny fahatsapana ara-pananahana izany-famoronan-tsary; mitsara ny fampiharana-teti-bola, mamela, ny logistics ho an'ny ekipa, fitaovana ary fiara; fahalalana momba ny jeografia, demografika, zoning, ny fahatakarana ny tantara - ny fomba nanamboarana ny tanàna; toekarena; fisintonana psychologie; sy ny fiheverana manan-danja ny fandaharam-potoana famokarana. Ary indraindray dia mandray marary mahagaga sy / na vintana ny olona iray.
"Ny zavatra voalohany ataoko dia tsy miraharaha izay zavatra vao nosoratako sy novakiako ny script. Tahaka ny famakiana boky iray, ny teny dia mamoaka sary ao an-tsaiko. Avy eo, ny tsirairay avy eo dia manomboka ny lalao. Indraindray ny mpamorona mpamorona, tale, mpamokatra dia hanome torolàlana, matetika dia mitaky fomba iray na vanim-potoana ary zavatra hafa. Fotoana dimy Bosch, Manana fahatsapana tsara ny zavatra tadiavin'ny olona aho ary inona no hiasa.
'Ny manaraka ny scouting. Mitady sy maka sary an-tsaina ary mandresy azo atao Ny safidy dia manaraka. Ny toerana sasany dia tsara indrindra amin'ny fampiasana ny Google Maps, ny sasany avy amin'ny traikefa taloha, ny sasany amin'ny fikarohana vondron'olona voafaritra. Resadresaka, fifampiraharahana, tolo-kevitra, ary vintana dia samy nahazo alàlana haka sary filalaovana filalaovana. Vetting, vetting, vetting ... Raha toa ka tsy mipoitra izany amin'izao fotoana izao dia asehoko ny sary. Ny famokarana samihafa dia samy manana fomba isan-karazany ho an'ny iza no mijery ny dingana, ary iza no manao ny fifantenana. Indraindray dia toa fiaraha-miasa izany, indraindray tsy misy izany. "
Mikasika ireo toetra notadiaviny tany amin'ny toerana, nanazava ny fepetra ilaina ho an'ny toerana iray i Schreiber. "Na manohana ny tantara sy ny litera ny toerana. Mifanaraka amin'ny sary ve ny saiko avy amin'ny habaka rehefa mamaky ilay script aho? Famoronan-java-maneno - misy fomba mahaliana ve? Matetika izahay, ary tsy manam-potoana eto izahay. Hazakaza-tsy misy fetra izy ireny: Ny fanelingelenana amin'ny saina izay mety hangalatra ny fifantohana amin'ny zavatra ao anatin'ny filmmaking filanjana azy. Raha misy tokantrano mahatsikaiky manakaiky varavarana mankany amin'ny trano maherin'ny "maherifo", dia mety hanelingelina ny mpijery izany. Tianay izy ireo hitondra ny pejy amin'ny script. Ny zavatra rehetra izay tsy manosika antsika ho akaiky kokoa io tanjona io dia mety ho safidy ratsy. Ireo mpihetsiketsika-raha toa ka misy ny fifanakalozan-kevitra momba ny zava-niseho, mety ho olana ny manaraka: Ny tranokala fanorenana akaikikaiky, ny zana-kazo, ny trano fanaraha-maso ny biby, sekoly, ny fifamoivoizana, na ny mpamily fiara ho an'ny fivarotana Banana Republic eo akaikin'ny toerana niakarantsika horonantsary izay nahatonga ny talen'ny Rob Reiner dia nanipika hoe: 'Fa inona ilay afobe ?!' Fotoana mahafinaritra azo antoka. Ary avy eo dia misy alalana. Ny filalaovana toerana dia tontolo tena izy, fa tsy feon-kira. Miantehitra amin'ny fiaraha-miasa mba hifehezana ny toerana ho an'ny horonantsary. Ny famoahana ny fahazoan-dàlana hametrahana ny dingana famokarana haka ny fananan'olon-tsotra sy ny vahoaka dia mety ho trotraka, ary indraindray tsy azo atao. Alohan'ny hampiasana fotoana sy fahafinaretana ho amin'ny safidy, dia manala ny fahombiazan'ny fahombiazana aho. "
Nanontany an'i Schreiber aho raha mampiasa rindrambaiko manokana izy mba hitazonana ny toerana samihafa nofantenany ho an'ny toerana misy azy. "Aza," hoy izy namaly. "Mandamina ny antontan-taratasy toy ny kabinetra fanoratana aho; lahatahiry, miaraka amina bara of sub folders. Ny sainiko dia miasa tsara amin'ny jeografia ary mahatsiaro tena tsara aho raha misy zavatra. Heveriko fa tsara kokoa ny sariohatry ny teny fitadiavana hanampy ahy, saingy tsy mbola nanana fotoana aho. Maro amin'ireo varavarankinan'ny Google Maps matetika no misokatra amin'ny biraoko amin'ny fotoana rehetra. Fampiendrehana paikady mora ampiasaina ho an'ny sary sokitra-matetika sary 500 isan'andro mandalo amin'ny fakantsariko. Sary manangona sary mihamitombo kokoa, saingy miala amin'izany isika. Na dia mitazana tsara aza ny poti-tsigara, dia tena mandany fotoana be. Indraindray dia esoriko any amin'ny saha ny Sun Path ap. "
Amazon Prime Video AMPAS asc Bosch BSC niantoka Abbey Downton Matahora ny maty hafanana isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw LUTs Michael Connelly Red SoftAtHome, MStar, CES2017 Sony Spears & Arrows Ny fifandraisana Frantsay TV Technology Ultra HD Forum Warner Brothers	2019-06-07
Previous: Chesapeake Systems dia manampy ny ekipa Southwest amin'ny Amy Lounsbury
Next: Computer Vision & Visual Effect Core Engineer